PP Non-xidhka daabaca dhar - Shiinaha Yixin
dhar PP non-leh tolmo wanaagsan
Inta badan isticmaashaa:
1. dhinacyada Caafimaadka iyo caafimaadka, sida alaabada la tuuri karo caafimaadka, dhar badbaadin, xafaayadda, suufka, alaabta nadaafadda shakhsiyeed,
2. qalabka Baako iyo qalabka dahaarka: sida bacaha kala duwan shopping, bacaha kaydinta, bacaha baakooyinka, Sahayda qoysaska iyo qalabka dahaarka;
3, qalabka ded beeraha, sida qoraxda, caddaynta cayayaan, ilaalinta qabow iyo kulayl, huurka iyo daboolaya film kale, film ilaalinta cawska iyo film beergooyska iyo wixii la mid ah.
Features of PP dhar non-leh tolmo wanaagsan
dhar PP non-leh tolmo wanaagsan waa nooc cusub oo daboolaya wax la permeability wanaagsan, nuugista qoyaan iyo gudbinta iftiinka. Waxay leedahay hawlaha hayo diiran, ka hortagga dhaxan iyo ka hortagga qorax. Sidoo kale waxa uu leeyahay dabeecad u ah oo miisaankiisu Light, iska caabin ah daxalka, cimri dheer (4-5 sano), fududahay in la isticmaalo iyo dukaan.
dhar cad non-leh tolmo wanaagsan la isugu duwo kartaa microclimate ee koritaanka dalagyada, gaar ahaan isku xirka xiriirka ka mid ah heerkulka, qorax iyo gudbinta iftiinka duurka ama seedling lagu koriyo, iyo sidoo kale khudaarta iyo geed seedling ee xilliga qaboobaha. Waxa looga hortagi karaa uumi ee ka yihin ka soo qorraxda kulul, geedo ma waxaad tahay degdeg, looga hortago geedo yar yar ee khudaarta iyo ubaxa gubatay xagaaga.
PP non-leh tolmo wanaagsan caddaymaha dhar:
9-220 g / meter width: 1.6 mitir / 2.4 mitir
Previous: dhar Non-dhar, waayo joodari
Next: wax Filter dhar non-leh tolmo wanaagsan gaar ah
dhar non-leh tolmo wanaagsan Calendered
Hot - duubay (ES) difaan non-leh tolmo wanaagsan